Ma ciyaari karaa MP4 on Apple TV? Waxaad u malayn kartaa waxa ay u muuqataa cajiib ah, laakiin dhab ahaan, waa su'aal caadi ah. MP4 waa uun weel qaab video. Files MP4 kala duwan ayaa laga yaabaa in properities kala duwan, sida audio & video codec, xallinta, framerate, bitrate, iwm TV Apple oo keliya taageeri karaan faylasha MP4 la properity gaar ah. Sidaas, haddii files MP4 aad laguma ciyaari karo on TV Apple, properites waa in gooshayso xadka ee TV Apple ah. Waxaa jira hab fudud oo aad isticmaali karto si ay u xaliyaan dhibaatadan.
Qaybta 1aad: Sida loo sii qulquli MP4 wax faylasha in Apple TV la Wondershare Video Converter
Qeybta 2: 3 Siyaabaha dar Movies in TV Apple
Qeybta 3: Sida loo soo dejinta Movies iyo Videos galay Lugood?
Uma baahnid in aad ku gartaan si loo beddelo properities audio & video file MP4 ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad kala soo baxdo Wondershare Video Converter oo raac tilmaan-hoose si toos ah qulquli files MP4 aad PC in TV Apple oo aan ka kaaftoomi kasta. Waxa kale oo ay taageertaa qaabab kale oo badan oo aan la socon TV Apple.
Fiiro gaar ah: The qaabab la jaan TV Apple oo kaliya M4V, MP4, MOV iyo AVI. Haddaba sidaas daraaddeed ayaa qaabab kale sida ugu MKV, VOB, wmv, waxaa la tagay.
Aan aragno sida aad u sii qulquli karaan wax files MP4 in Apple TV la cajiibka Video Converter. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida ay u raaxaystaan ​​warbaahinta on TV, hubi hagahan >>
1 Hel Wondershare Video Converter
Download barnaamijkan ka badhanka dowload soo socda oo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Ka dib markii la rakibey, waxaad ka heli doontaa on desktop icon toobiye ah Wondershare Video Converter Ultimate iyo sidoo kale in ay plugin --_ 1_698_1_ Media Server.
2 dejinta files MP4 si aad u Server Media
Double guji icon toobiye ee Server Media Wondershare oo guji Import in aad ku darto files aad. Ama waxaad riixi kartaa Disk Scan ku darto oo dhan files video on your computer.
3 Calan xiriir aad internet
Hadda waxaad u baahan tahay in la dhiso xidhiidh aad internet iyo in la hubiyo in aad PC iyo TV Apple ku xiran yihiin mid la mid ah. Ka dib markii in, Server Media ee lagu ogaan doonaa TV Apple oo aad dooran kartaa in aad streamer warbaahinta.
4 MP4 Stream in TV Apple
Hadda, aad mouse ka badan file ah oo ku saabsan Server Media iyo riixi kartaa Play badhanka TV on. Ka dib markii in, aad ku raaxaysan karaan faylasha aad on TV weyn via TV Apple. Waxaa ka qabin wax dheeraad ah oo qaabab aan socon.
Haddaba waad arki kartaa durduri in mid ka mid ah files MP4 si aad u Apple TV sidaas u sahlan yahay. Waa maxay sababta aad stilling dib u celineyso, kaliya qaado barnaamijkan oo ay isku day ah. Iska ilow wax dhibaato waafaqsan warbaahinta la TV Apple. Wondershare Video Converter Ultimate Waa caawiyaha ugu wanaagsan.
Haddii aad raadinayso in aad ku darto fursado madadaalo oo dheeraad ah si aad TV Apple, waxaanu ku siin habab ay ku darto filimada dheeraad ah si ay u baahiso aad liiska.
1) Iibso ka Lugood,
a) Ku bilow furitaanka Lugood ku saabsan habka. Haddii aad ayan ku rakiban weli, waxaad kala soo bixi kartaa Mudanayaasha ka soo website Apple ee.
b) In interface Lugood ah, tag dukaanka, oo hoos ku riix doorasho Lugood Store. Tani waxay aad la isugeeyey lahaa in Lugood dukaanka.
c) In dukaanka screen Lugood ah, tag iyada oo menu digsi sare iyo dooro Movies. Tani waxay aad la isugeeyey liiska kale oo laga filimada halkaas oo la soo xulay kartaa inaad kala soo baxdo, kirada, ama gadashada. Waxa kale oo aad dooran kartaa filim iyada oo noocyo kala duwan.
d) Marka aad xulo filimka, aad geyn doono page movie halkaas oo aad ka arki kartaa kooban dhagarta, dooranayaan si aad u eegto trailer oo lacag la'aan ah, oo ay la socoto faahfaahin kale sida mar ordo, taariikhda loo sii daayo, rating, ay la socdaan gaarka ah ee kale. Waxa kale oo aad eegi kartaa iyada oo talooyinka sida waxaa jiri lahaa liiska waxa daawadayaasha kale ayaa daawaday ay la socdaan filimkan. Si toos ah sawirka weyn ee movie ee dhinaca bidix ka yar, waa 2 badhamada, la tilmaamayo 'Buy Movie' ama 'Rent Movie'. In xaaladdaasi, waxay u badan talinayaa in la doorto for the 'Rent Movie' doorasho. Waxaad la siiyo waqti xadidan oo ay ku soo bixi filimka, waxa ku siinayaa 24 saacadood inuu u ciyaaro filimka marka aad riixi on play; haddii kale filimka waa la heli karaa si ay u soo bixi muddo 30 maalmood ah. Gadashada filimka ogolaan doono in aad ka soo dejisan oo ku kaydi.
e) la socoto "Buy filimka 'iyo' Rent filimka 'fursadaha, sidoo kale waxaa jira fursad u' Add to Jeclaan List 'ama' Si hadiyad filimka 'in qof kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad kiraysanayso filimka, doorasho qaybsiga la xadiday in warbaahinta bulshada.
f) Marka aad dhamaysato habka, waxaad tagtaan dalka doorasho 'Movies' oo ka heli filimka aad soo bixi ka dib markii wax gadashada / ijaarka.
g) Tag laybareeriga iyo double click on filim aad u jeclaan lahaa inaan ciyaaro. Ku raaxayso madadaalada.
2) iibsiga ka Amazon:
a) Habka si aad u iibsato filimada ka Amazon la mid tahay in Lugood. Marka, aad qortey in aad Amazon Ra'iisul Store (Xubin Separate loo baahan yahay), lagugu hagi lahaa in aad xisaabta ee bogga guriga.
b) Ka dib xulashada tab filimka, aad isticmaali kartaa iyada oo loo marayo tiro ka mid ah filimada, laakiin waxay bilaabmi la duuban ee 'Free Amazon Instant Video App' aad iPhone, iPad, iPod ama taabashada.
c) Hubi in aad saxiixday in aad ID Amazon Ra'iisul Times.
d) Tani aad u saamaxaaya in ay raadiso content aad jeceshahay ama caleenta iyada oo buugga ku soo koobi karin oo aakhirka la filim oo aad kiraysan kartaa, wax iibsada, oo ciyaaro.
e) Ku bilow filimka iyo guji AirPlay icon (bandhigay saxda hoose), iyo dooran TV Apple.
f) Fadlan la soco in labada hab u baahan ee macruufka yaraan 6.
3) in lagala soo baxo MP4 Shabakadaha Movie:
Sida caadiga ah, Apple TV taageertaa files qaab MP4 ah. Mid ka mid ah u tegi kartaa website kasta oo kala soo bixi filimada sida ay doorashada iyo raaxadeeda.
Waxaa jiri lahaa shuruudaha convertor ah si ay wax soo saarka ay qaabkan u MP4 la doonayo.
Marka hawlaha qaab beddelidda waa dhameystiran yahay, dadka isticmaala ku raaxaysan karaan filimada ay.
Halkan waxaa ah websites yar ka users soo bixi kartaa filimada loogu TV Apple:
Filimada iyo videos Keenista in Lugood waa hab si cadaalad ah u fududahay haddii mid ka mid socota tallaabooyinka la siiyo:
1) la navigation ku bilow. Tag filim aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan ka Lugood maxaa yeelay, waxay ku ciyaari TV Apple ka ay meel on your computer.
2) Waxaa muhiim ah si loo xaqiijiyo in qaab ka mid ah filimka aad dooratay waa la jaan TV Apple. Qaabab socon waxaa ka mid ah .m4v, .mp4, iyo .mov. Si kastaba ha ahaatee, .avi iyo .wmv Ma la TV tufaax shaqeeyaan.
3) Ku bilow codsiga Lugood ee on your computer.
4) Jiid oo file wuxuu soo daadiyaa meel ay kaydinta galay Lugood. Movie The laga gali karo folder filim aad Lugood dukaanka.
> Resource > Video > ma ciyaari karo MP4 on Apple TV? Xalliyo.